Qabsoon Keenyaa Manii gahuuf jalqabe ifatti lafa kaahate … – Ayyaantuu
HomeAfaan OromooQabsoon Keenyaa Manii gahuuf jalqabe ifatti lafa kaahate …
Qabsoon Keenyaa Manii gahuuf jalqabe ifatti lafa kaahate sanatti iggitii gochuuf of qindeessuu barbaachisa!
Caalaa Hayiluu, Waxabajjii 3, 2020
Qabsoon manii hin kaayanne galma gahus kan abbaa itti wareegamee tahuu hin dandahu.
Oromoon erga gita bittaa Impaahera Xoophiyaa jalatti kufee gabrummaa hammaataf saaxilamee takkaa harka maratee hin teenye. Karaa halle cufaan dhidhittaataa ture sirnicha jalaa bahuuf. Keessattuummoo walakkaa jaarraa dhaa oliif bifa facahaa fi qindaahaa taheen qabsoo hadhooftuu sirna impaahera Xoophiyaa irratti gaggeessa tureera.
Erga ABOn bifa jaarmiyaan as bahee ijaaramee immoo gaaffii isaa fi kaayyoo qabsoo isaa qindeeffatteet qabsoo finiinsaa ture. Kaayyoon ABOn lafa kaahate sanaaf WBOn wareegaam hadhooftuu baasaa kunoot waggoota 40 caalaaf deemaa jira. Hardhas qaqqaaliiwwaan ilmaan sabaa kufaa fi kuffisaa jiru.
Oromoon saba tokko, biyya tokko Oromiyaa jedhamtu qaba, Oromiyaan biyya taatee sabni Oromoo bilisummaa fi walabummaan jiraachuuf qabsoon godhamaa ture. Kana sharafuu fi xiqqeessuun manii keenya yoo nu hanqise malee manii keenyan nun gahu.
Muudannoolee fi kufaatii seenaa keenya keessatti nu muudatan
Oromoon saba tokko, biyya tokko Oromiyaa jedhamtu qaba, Oromiyaan biyya taatee sabni Oromoo bilisummaa fi walabummaan jiraachuuf ABO ijaaramee qabsoon godhamaa ture. Kana sharafuu fi xiqqeessuun manii keenya yoo nu hanqise malee manii keenyan nun gahu.
Haa tahu malee yeroo yerootti jijjiirama xixiqqaa fi gurguddaa Impaahera Xoophiyaa keessatti tahaa ture keessatti qoonni ijoollee Oromoo bifa lama qabata.
Warra jijjiiramni dhufee biyyattiin fedha uummataatiin ijaaramtee mootummaan uummataa akak ijaaranee uummanni nagaa fi dimookiraasii barbaadu argatu hawwanii fi kanneenimmoo jijjiirama hundee kan sabaa fi sablammoonni hiree ofii murteeffatan fedhanii dha.
Warra ulaa banamte akka carraa dhuunfatti ilaallachuun keessatti hammatamanii gam-tokkoon fedha sabaa dubbachaa gama tokkoonimmoo sirnichi akka hundeen hin buqqaanee taasisanii ofii garuu yeroof riqicha nama biraa tahuun isa kaan Oromoo irratti yaabsisaanii ofimmoo ykn baduu ykn ergamaa bara baraa tahanii jiraachaa turanii dha.
Qaamotni kuni lamaan bara kaanis barreengaddaas, baranas jiru. Hanga isaan Oromoon sirriitti gingilchee garee dhugaa maachee warra fakkeessitoota ofirraa dhilee hin baasnettti gufuu ta’aa jiraachuun isaanii waanuma jiru. Warra lamaan kana keessaa inni duraa warra haqaan wareegama kaffalaa fi kaayyoo wareegamaniif sanallee fiixa baasuuf jalqabumayyuu qabsaahaa turanii fi kanneen yeroon akka galaanaa fuutee qabsootti dabaltes ni hammata.
Akka kanaan Mootii #Haylassillaasee kuffisuu keessatti qoonni Ilmaan Oromoo qooda leencaa yoo tahellee manii qabsoo isaanii maal tahuu akka qabu dursanii waan lafa hin kaahanneef warra lafa kaahatee ykn waanuma duraanuu qaban itti fufsiisuu barbaadantu wareegama ilmaan Oromootin muummee aangoo yaabbatee Oromoo deebisee dhiituutti taa’e.
#Waggoota17 guutuu Oromoo hin jirree meeqa argee, ammoo abdii kutachuu dhiisuudhaan akkuma qabsaahoota saboota kaaba Xoophiyaa #Shaabiyaa-EPLF, #TPLF fi kanneen biroo waliin ABO nis qabsoo Oromoo waaltessee wareegama hadhooftuu gochuun #Dargiin kufullee Oromoon ammas waan bubbuutuu haa argatuyyuu malee gaaffileen gooroo akka sabaatti lafa kaahate deebii argachuu dhabeet daranuu dararaa fi raarroo hamtuu jalatti kufe. Kunis hanqinootuma duraanii sana sirreeffachuu dhabuu fi dantaa sabaa dursuu dhabuu namootaatiin uumame.
Gaaffiin isaa deebi’uun hafee ilmaan boojuu of ijaaranii bakka qabsaahota dhugaa of buusuun waggoota 28 guutuu dhiiga Oromoo xuuxaa kan turte OPDOn takkaa Oromoof fira ta’anii hin beekan.
Haa tahu malee ammas qabsoo silaa maniin keenyaa mal akka tahe lafa kaahatamerraa maquun, namoonni gariin ofitummaa, #ego fi dantaa matayyaa isaanii injifachuu dhiisanii wan hundumaa saba kanaan odoo hin gahin Wayyaaneen bututtee aangoo gadhiiftullee, jarri ittiin bubbuluuf warruma kaleessa Oromoo ajjeesaa fi hidhaa ture sana qaama jijiiramaa gochuun as nutti baasan. Jarrri kuni afaan isaanii keessaa nadhiitu cobaa ture.
Uummata keenya burjaajessuu fi qabsoo oromoo gara dabarsuuf yeroo dheeraa itti hin fudhanne. hojiin isaanii waan biraa yoo tahellee madaa fi godaannisa Oromoo hooqudhaan qabsaahota haqa tahanii as bahan. #Diyaasporaa fi keessaan warri silumayyuu amni isaanii gabaabaa fi kaayyoo muummee lafaa hin qabne kan garuu humna hedduu qaban fudhatama akka argataniif jara akka waan qabsaahota dhugaatti fuudhanii samiirra baasan. Abdiin Oromootuu isaan tahuu nuuf himan. Jarri garuu toftaa abonboleetii fi warraaqsa uummata Oromo jalaa akkamiin baanaa fii akkamiin gowwoomsinee aangoo irra turraaf malee takkaa feeteen Oromoo sammuu isaanii keessa bulee hin turre.
Isa kana kan ragaa guddaa taasisu guyyaa TPLF xaxattee biyya abbaasheetti dachaatee waayee Xoophiyaa gattee daangaa #Tigraay guddoo tikfachuutti seentee, jarri #bulguu hamaa tahuun Oromoo nyaachuu eegalan. Oromoo caalaa diina hundee fi innikaa Habashaa firoomfachuu filatan. Oromummaa fi Oromoo cabsuuf duulaa haamilee fi eenyummaa Oromoo irratti baniinsisan, Xayyaaraan Oromoo tuman, hidhaa hamtuun kaambii loltutti Oromoo guuran akka #concentartioncamp warri Jarmanii ijoollee Jawushii godhan Oromoo goote jarri maqaa Oromootin aangoo dhuunfatte.
Akkuma kaleessaa dubbii fi gochanaanis Oromoo diinomfatan. Gaafas warra ”Qabsoo nutu hoogganaa jiraa fi Oromoon bilisummaa gonfachaa jira…”jedhaniin, nuti lakkaa yaa jarana qabsoon keenya manii hin geenye, qabsoo keenya finiinee manii gahuu qaba jechuun Qeerroon qabsoo itti fufnaan olola, ”diinatu qindeesse…” jechuun haamilee qeerroo unkuteessan. Yaa jamaa, maal taatan uummanni keenya hireesaa haa murteeffatu, Oromoon caba biraa cabuuf deemaa jara kana jalatti Oromoo hin qabinaa jennee iyyinus namni nu dhagahee abbaa kanaa nuun jedhe hin turre.
Warri gurra guddatuu fi harka dheeratu haqa Oromoo haqanqaalanii fedha matayyaa kan walakkaa Gadaa tokkollee hin dabarreef Oromoo okkolchiisan. ”Galaa rafaa, bilisummaan keessan dhugoomera, bilsummaa keessa dhamdhamaadhaa malee waan biraa dhiisaa…” jedhanii ajajan. Sabichis dhugaa itti fakkaatee, murna sagalee guddaa qabu kanneen amanee gabrummaa hamtuuf manatti dacha’ee dhamdhamuu eegale. bilisummaan jedhame garuu gitta bittaa haaraa fi gabrummaa barri itti darbee fi dulloomaa duubatti hafaaf saba keenya kan saaxile ture.
Egaa bilisumaman isaan nuuf labsan suni waggaa tokkoo mitii baatii baatii 6 gahuu hanqate.Osoo wanti hunduu Oromoo irratti kufee argaa jiranuu xisximbaa dhiisanii daranuu qabsoo Oromoo diiguu fi laamshessuu tarsimoo addaa godhatanii bobbaa eegalan. Qabsaahota Oromoo xiqqeessuu fi moggeessuu, ololaan irratti duuluu fi haamilee isaanii cabsuudhaan darabnii waraana bilisummaa Oromoo sabni kuni itti beela’ee,dheebotee ijaarrate micciraanii,kaanimmoo gowwoomsanii maqaa jaarsummaa fi abbootii gadaa jedhuun hiikkachiisanii boojuu taasisaan. Warra isaan amanee gales mana hidhaatti naqsiisanii summii nyaachisiisan. Daba guddaa kana osoo laalanuu dubbachuufirra ”#jijjiiramatu gufataati callisaa…” jechuun labsa biraa labsaa turan.
Kuni muudannoo waggaa lama keessatti keessa dabarre waan taheef madaansa ahin qoorre waan taheef hinuma kulkullaffanna.
Egaa qabsoo hadhooftuu Ilmaan Oromoo itti dhiiganii,lafee itti caccabsanii fi lubbuu qaaliwwan itti wareegamaniin TPLF bakkaa sochootullee Oromoon aangomee gaaffiin isaa akka inni gaafachaa turee fi qixeeffatee kaahatetti manii gaheefi abbaa itti hin taane. kuni seenaa keessatti madaa guddaa jechaa dha.
AMMA MAALTU DEEMAA JIRA?
Hayyee amma hunduu digirii 360 garagalanii mormitootaa ilmaan abbaa gadaa tahuusaanii nuuf himaa jiru. dagalees ol guddisanii akkuma duraanii sana mormituu jabaa tahuusaani argaa jirra. Darbaniiyyuu mootumma akana kuffisuuf tarsimoo nuuf baasaa akak jiranillee ni agarra. gama biraatin miidiyaalee xixiqoo fi gurguddoos dhuunfatanii shuffee guddaan akka shaffisaa jiranis sirriiti garra. Kanarrayyuu darbanii warri dursa WBO dhaan shanee fi shiftaa jedhee abaaree abaarsisaa ture, amma warra ”tinnisuu qabnaa fi deemneyyuu WBO waliin hirmaannee qabsoo gochuu qabna…” nuun jedhanis isaani. Baayyee gaaridha garuu akkamittiin isaan amannee duuba hiriirraa? Bakka isaan seenaa qabsoo Oromoo keessatti dhaabbachaa, baqachaa, fi akka ameebaa fi gaararraa jijjiiramaa as gahan osoo beeknuu akkamiin isaan amannee waliin dhaabachuu dandeenya?
Tarsimoon isaan nuuf baasan gatachiisaa fi abadachiisaa tahuusaa maaltu nuuf wabiidha? Akkuma kaleessaa wareegama ilmaan hiyyeessaa kumaa fi kitilaan booddee, bilisoomnerra dhaabbadhaa jechuu dhabuu isaanif maaltu wabii dha? Jarri kuni kaayyoo dhaabbataa fi muldhataa qabatanii hin beekan. Rakkoo xixiqqoo fi yagyagaa rakkoolee Oromoo dhaadhesssuu fi haasahuu malee, fedhanimmoo mootummaa kuni of jijjiiruu qaba jechuu malee egeree Oromo fi Oromiyaa irratti waan dhaabbataa itti amantu hin qaban. Oromoon hireesaa murteeffachuu afaaniin darbee darbee dubbataniyyuu haqaan gaafa dubbiin suni xiixee dhufe warri diina waliin Oromoo dura dhaabbatu jara tahuu hin shakkisiisu. Kanaafuu maaltu fala?
Oromoo Hooggantoota qabdaatii tamjiin sitti hin bu’in!
Oromoo abbaan barbaadee waan ati feeteu waan dubbatee fi irra deddeebi’ee waceef hoogana keet miti, amantees waliin deemuun sirra hin jiru. Hooggantoonni kee Bosonaa fi gaarreen Oromiyaa keessa diina waliin qabsoo hadhooftuu irratti kufaa fi kuffisaa jiru. walakkaan immoo Finfinnee keessa diina waliin kokkee wal qabaa jiru. kaanimmoo manneen hidhaa Nafxanyootaa keessatti si jalaa dararaamaa jiru siif fi haqa kee tiksuuf jedhanii.
Kanaafu qajeelfaamaa fi tarsimoo kan siif baasu jara tahuu qaba. Hunda caalaammoo ijoollee kee muratoo fi qaqqaalii kanneen lubbuu takkitttii jijjiirraa hin qabne siif wareeguf Bosonaa fi gaarreen kee keessati dheebuu fi beela waliin waldhaansoo qabaatii diina keetiin lolaa jiran amanuu qabda. Isaan dantaa uummata isaanii malee ofiisaanii dantaa dhuunfaa qaata gatan. Ati nagaa taanan, ati bilisoomtee, birmadummaa kee mirkaneeffannaan isaan fedha biraa hin qaban. Akka ati kana argattuuf garuu daqiiqaa daqiiqaan wareegama hadhooftuu kanfalaa jiru. Kanaafuu hooggantoonni kee dhugaa fi ati sirnan dhaggeeffachuu qabdu isaani. Gaafa qajeelfama isaaniitiin masakamne bilisummaa fi walabummaan Oromiyaa dhiyaachuu ishii hin dagatinaaa.
Nuti saba tokko, hiree tokkoo fi biyya tokko qabna;biyyi teenyammoo Oromiyaa dha. Oromiyaanis ni bilisoomti;akka bilisumaman dhiyaattuf immoo kaayyoo kana jalatti tokkummaan sochoo’uu gaafata. Xoophiyaa ushaalaa fi suphaa gaaffii Oromoo gaaffii Habashootan wal qixeessatii bilisummaan dhufu tasuma hin jiru.
Qabsoon Abbaa Biyyummaa Ququnxuraa Siyyaasaan Hinargamu Qeerroo Bilisummaa Oromoo Finfinnee Oromiyaa, Bitootessa 28, 2018 Qabsoon…